Na-abaghị uru: Cloud-based Fundraising 3.0 with Bloomerang | Martech Zone
Wednesday, October 2, 2013 Monday, June 8, 2015 Douglas Karr
Ọ dịla anya teknụzụ njikwa ndị na-enye onyinye na-enweghị atụ na draịva UI, UX dara ogbenye na nnukwu ụgwọ. Bloomerang na-agbanwe akwukwọ. Co-tọrọ ntọala na 2012 site na afọ 30 nke ụlọ ọrụ na-abụghị ọrụ na nkà na ụzụ Jay .hụnanya, na igwe ojii na-enweta ego na ngwanrọ na-enyere ndị na-abụghị ndị ọrụ aka aka jikwaa ọdọ mmiri nke ndị nyere onyinye.
ebe Bloomerang iche iche onwe ya bu ihe elebara anya njide ihe. Ọ bụ ezie na ọtụtụ mmemme sọftụwia na-enweghị ọrụ na-enye ndị na-enweta ego ohere ịrịọ na ntinye onyinye, Bloomerang na-enyekwa aka omume kacha mma maka ijigide ndị nyere onyinye ahụ. Ọ bụrụ n ’igwu na data ahụ, a na-eme ka elekwasị anya n’ezi omume. Onu ogugu ndi nyere onyinye maka ndi na-abughi ndi mmadu bu ihe dika 40%, nke putara na maka ndi nyere onyinye 1,000 nile n’abu n’afo 1, obuna ano n’enye onyinye nke abuo. Nke ahụ bụ ọtụtụ ego furu efu maka ndị ọrụ ebere.
Mgbe onye ọrụ batara na mbụ, nke ha dị ugbu a onyinye njigide onyinye bụ ihe mbụ ha kwuru, na-eburu ya n'uche nke ọ bụla na-eweta ego nke na-eji sọftụwia ahụ. Bloomerang sorokwa onyinye onye ọ bụla nyere, na-egosi gị otu ilele anya ka onye nyere onyinye na-eguzosi ike n'ihe n'ezie. Ndị na-ahụ maka ego nwere ike ilekwasị anya na ndị na-agba ịnyịnya ma ọ bụ tinye aka na ndị dara ada. Otu mba amaara ama na ụlọ ọrụ mebere interface ahụ, nke na-anọchite anya ọpụrụiche a nabatara site na nke a na-adịghị ahụkebe, emelitere menu nke a na-ahụkarị n'etiti usoro nchịkọta ego.
Ihe puru iche mgbakwunye mgbasa ozi na-elekọta mmadụ na-enye ndị ọrụ ohere itinye ihe ndekọ mgbasa ozi mmekọrịta nke ndị nyere ha ma soro ha kwurịta okwu site na ọwa ha họọrọ. Mgbe e mesịrị nsụgharị nke software ga-n'ezie eme ka mmadụ mgbasa ozi aka na a na-enye onyinye aka njikọ aka. Yabụ, retweets, mmasị na mbak nke ọdịnaya anaghị enyere gị aka ga-abanye na Bloomerang.
Bloomerang na-achọ ndị na-enweghị uru pere mpe pere mpe iji sọftụwia ha.
Hazie a ngosi!
Tags: bloomerangọrụ ebereonyinyeonyinye njikwa teknụzụnchịkọta softwarejay ịhụnanyaabụghị uruTeknụzụ njikwa onyinye na-enweghị ọrụ